भरतपुरलाई धुम्रपानरहित बनाइने - Jagaran News Jagaran News
Published On : 18 February, 2020 3:10 pm
काठमाडौं, फागुन ६ । भरतपुर महानगरपालिकालाई धुम्रपानरहित शहर बनाइने भएको छ । आगामी डिसेम्बरमा विशेष समारोहबीच औपचारिक घोषणाका लागि महानगरपालिकाले तयारी थालेको छ ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार महानगरलाई धुम्रपानरहित शहर घोषणा गर्न समिति निर्माण गरी हरेक महिनाको एक दिन बैठक बसेर गृहकार्य शुरु गरिएको छ । गत साता इण्डोनेशियाको बोगर नगरमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख दाहालले भरतपुर महानगरलाई ‘स्मोक फ्री सिटी’ बनाउने प्रतिबद्धता गरेकी थिइन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशन गरी महानगरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बिक्री वितरणमा निषेध गरिएको जनाएको छ । प्रमुख दाहालका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐनको दफा ४ अनुसार भरतपुर महानगरपालिका सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक सवारीसाधन, बालगृह, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग कलकारखाना, मनोरञ्जन स्थल, होटल रेष्टुरेन्ट, खेलकूदस्थल, व्यवसायस्थल, धार्मिकस्थल, सार्वजनिक सवारीसाधन, प्रतीक्षालय, तथा धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पूर्णत निषेध गरिएको छ । होटल रेष्टुरेन्टमा तोकिएको स्थानमा मात्र धूमपान गर्न पाइनेछ ।
डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइयो ज्ञापनपत्र, वार्ता गर्न विवेकशीलको माग
काठमाडौं, असोज ९ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गरी
डा. केसीको अडान- ममाथि प्रहरीको जवरजस्ती भयो कुनै उपचार लिन्न
काठमाडौं, असोज ४ । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै जुम्लामा १९औं सत्याग्रहमा रहेका डा। गोविन्द
काठमाडौं , असोज ३ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्यकर्मीमा बढी देखिन थालेको छ